I-Marshall Electronics Goes-All in ukuze ihambise isisombululo soMgangatho woSasazo kwi-Intanethi yeTekhadi leNdlu yePoker | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » I-Marshall Electronics Goes-All in ukuze ihambise isisombululo soMgangatho woSasazo kwi-Intanethi yeKhadi lePoker leKhadi laseTexas
Uyilo losasazo lweOmega eMarshall Miniature HD kunye NeCompact HD Zandisa iikhamera Ukuthimba iMidlalo yeKhadi leProfayili ephezulu
I-AUSTIN, TX, AUGUST 24, 2020 ̶ When the Texas Card House, the first legal poker club in Texas, was looking to create a broadcast quality, live streaming solution designed to bring its online audience up close and personal views of all of its high-profile tournament action, it turned to 30-year industry veteran Omega Broadcast, a provider of usasazo izixhobo zevidiyo. Ukujonga ukuhlala ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali ngelixa ungonakalisi kumgangatho, u-Omega Broadcast ufumene impendulo ebeyifuna ngaphakathi Phumlani CV503 Encinci HD kunye neekhamera zeCV350 zoCwecwe zoom.
“Besikade sisebenzisa uMarshall ngaphambili kwaye besisazi ukuba ibizakuba lelona khetho lilungileyo kwi-Texas Card House ebelifuna ukuyenza, utshilo uDavid Fry, usekela-Mongameli, u-Omega Broadcast. "Iimveliso zikaMashall kunye nentengiso namaqela enkxaso akumgangatho wehlabathi, kwaye sakuvuyela ukusebenzisana nathi kwakhona."
Le projekthi, iqela le-Omega layila kwaye lafaka isakhelo sesiko elenga ngaphezulu kweenyawo ezintandathu ngeenyawo iitagi eziziinyawo ezisithoba, eyabelwe ngokukodwa ukhenketho lweprofayili ephezulu. Zonke izixhobo ze-elektroniki zigcinwa ngokucocekileyo ngaphakathi kwisakhelo, ezibandakanya iikhamera ezisixhenxe, ii-microphone ezimbini, kunye nezibane ezine. Isixhobo sasifuduselwa e-ofisini yangasemva ukuze sijongwe ngasese ngekhamera eyongezelelweyo yeMarshall enomlawuli weRCP. Kutyelelo ngalunye oluphezulu olunamanzi amaninzi, umdlalo werekhodi urekhodiwe kunye nommemezeli ophawula kwigumbi elingasemva. Yonke imisinga inokulibaziseka kwemizuzu engama-30 ukukhusela ukuthembeka kwemidlalo.
Kwindlu yaseTexas Card House, iikhamera zeMarshall zeCV350-10XB zisetyenziselwa ukujonga abadlali kunye nokusondela phezulu kwamakhadi kunye nokuqaqambisa ilogo yeTexas Card House. Ineenzwa zomfanekiso wayo, ikhamera ye-CV350- 10XB ibona umdlali othethayo kwaye atshintshe indlela eya kulo mdlali, anike ababukeleyo amava apheleleyo wokubukela kunye nokuva isenzo. Ukuxhasa i-2.5-megapixel 1/3-intshi HD inzwa ephezulu yokusebenza, i-CV350-10XB inokubamba iintshukumo zabo bonke abadlali. I-CV350-10XB ixhasa i-RS-485 ukunxibelelana kwamandla ngebhokisi yokuhambisa amandla ye-12V.
Ukongeza, iikhamera zeMarshall ze-CV503 zisetyenziswa phezu kwetafile nakwezokubhabha okubanzi zeziko lokhenketho. Nge-megapixel eyi-2.5, i-1 / 2.86-intshi inzwa, i-CV503 izisa ngokucacileyo kwaye igcwele-HD ividiyo. Ikhamera yeCV503 ineentaba ezinokutshintshwa zeelensi eyi-M12. Le khamera inakho ukuhlengahlengiswa ukude nge-RS-485 okanye isixhobo sokudlala imenyu.
I-Texas Card House iqale ngamakhulu nje ambalwa ababukeli kwaye ngenxa yomgangatho kunye nokucaca kweekhamera zeMarshall, ngoku banababukeli abayi-10,000 kwi-intanethi, ”wongeza uFry. Inkampani ivuye kakhulu ziziphumo, baceba ukumilisela le teknoloji intsha kuwo onke amanye amaziko. ”
Yasekwa e-Austin ngonyaka ka-2015, umsebenzi weTexas Card House ukuzisa ukhuseleko, ipoker yenqanaba lokuqala kubadlali kulo lonke ilizwe laseTexas. Iklabhu ibonelela ngeendawo ezininzi eTexas ngamalungu ayo ukonwabela iindlela ezahlukeneyo zeklabhu kwiklabhu ephezulu yezoluntu kunye nabathengisi abaziingcali kunye neyona nkqubo imnandi yelizwe.
Ukuphosisa umdibanisi - Oktobha 23, 2020
UmNcedisi woPhuhliso - Oktobha 23, 2020
umhleli - Oktobha 23, 2020
Ividiyo yokusasaza Ikhamera ye-CV503 Miniature Marshall Electronics 2020-08-24
Previous: I-Sequin AR inyula u-Brad Rumler njengo-Sekela Mongameli weNtengiso kwi-Spearhead Ukwandiswa kunye noKhula: iNkampani yeNkxaso yeNkxaso yeNkxaso yeNkqubela phambili yongeza iNkokeli enamava eyayikhe yabamba iZithuba ngeBrainstorm, i-AT & T kunye neApple, Inc.
next: IiVidiyo zikaMatthews zixhasa iiMidlalo zeMovie ezithetha iSpanish